Bas kale oo 304 Bas ah oo Looga Qaybqaato Kaalinta ESHOT | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 Izmir304 Bas oo Kale Oo Loogu Talagalay Ka-Qaybgalka ESHOT Fleet
10 / 05 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Bas ayaa lagu dari doonaa doonyaha eshot-ka
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay dalbaneysaa 134 bas, oo ay ku jiraan 170 basle iyo 304 solo. Gawaarida waxaa la keenayaa sagaal bilood gudahood marka heshiiska la saxeexo.
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay qaadeysaa tilaabo kale oo muhiim ah oo lagu cusbooneysiinayo diyaarada basaska. Agaasinka Guud ee ESHOT, oo taageera 60 boqolkiiba rarka gaadiidka dadweynaha, ayaa dalbanaya 134 bas, oo ay ku jiraan 170 basle iyo 304 solo.
Ogeysiiska gundhigga ah waxaa lagu daabici doonaa bogagga shabakadaha ee Hay'adda Iibsiga Dadweynaha (KIK) iyo Agaasinka Guud ee ESHOT Isniinta, Meey 11. Baqshadayaasha bidaarta ayaa lagu furi doonaa 11ka Juun 2020 iyadoo la adeegsanayo habka e-hindisada. Basaska cusub ee dabaqa hoose leh, oo leh qaboojiye, gudbinta otomaatiga ah, taleefanka gacanta iyo unugyada lagu dallaco kiniiniga, oo ku habboon heerarka ka saaridda Euro 6 iyo adeegsiga naafada ah, ayaa loo gaarsiin doonaa ESHOT sagaal bilood gudahood taariikhda heshiiska.
Guud ahaan 387 bas
Maalmihii ugu dambeeyay ee 2019, Agaasinka Guud ee ESHOT wuxuu ku daray 15 bas oo kuwa cusub ah Janaayo 2020, 52 basas cusub ayaa toos loogala qaatay Xafiiska Maqaalka Gobolka. Agaasinka Guud ee İZULAŞ wuxuu raaciyay 2020 bas oo cusub qeybtooda koowaad rubucii 16. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay magaalada u keeni doontaa wadar dhan 304 bas oo cusub Abriil 2021 iyada oo qandaraaska la siinayo 387 bas.
105 baabuur oo ka socda Mercedes-Benz oo u socday gaadiidka millatariga ee Ulusoy